जनताको विजोग देखेपछि कुमारले भने, ‘सरकार मलाई अनुमति दे, ब्यक्तिगत खर्चमा सबैलाई म घर-घर लगिदिन्छु’ – Everest Pati
जनताको विजोग देखेपछि कुमारले भने, ‘सरकार मलाई अनुमति दे, ब्यक्तिगत खर्चमा सबैलाई म घर-घर लगिदिन्छु’
काठमाडौं । सरकारले लामो समय देखि घोषणा गरेको लकडाउनका कारण दैनिक काम गरेर खाने मजदुरहरु बेखर्ची भएपछि लामो बाटो पैदलै हिडेर काठमाडौं छोड्न थालेका छन् । काठमाडौंवाट वर्दिया, सुर्खेत सम्मको यात्रा पनि पैदलै तय गर्न काठमाडौंवाट मजदुरले यात्रा सुरु गरेका छन् । साना बालबालिका बोकेका महिलाको सडकमै विजोग भएको छ । वाटोमा साना नानीलाई सुताएर महिलाहरु आराम गरेको देखिन्छ ।
यस्तो विजोगको अवस्था हुँदा पनि उनीहरुलाई सुरक्षित घर सम्म लैजान तर्फ तीन तहको सरकारले वास्ता नगरेपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भएको छ । सरकारले त्यसरी पैदलै घर हिडेका मजदुरलाई सुरक्षित तरिकाले घर लैजाने वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै सर्वसाधारणले आग्रह गरिरहेका छन् । यसैबीच चर्चित हाँस्य कलाकार कुमार कट्टेल उर्फ जिग्रीले पनि त्यस्तो विजोगको अवस्था हुँदा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेपछि सामाजिक सञ्जाल मापर्ःत आग्रह गरेका छन् । उनले अहिले लकडाउनका बेला अलपत्र परेका सबैलाई आफ्नो व्यक्तिगत खर्चले आफै गाडीको व्यवस्था गरी उनीहरुको घरसम्म पुर्याउनका लागि आफुलाई पास बनाईअनुरोध गरेका छन् ।
कुमार कट्टेलले सरकारको कार्यनीतिप्रति प्रश्न चिन्ह उठाएको पनि उक्त स्ट्याटसले बुझ्न सकिन्छ । उनले यस्तो बेला सरकारले मेरो यो अनुरोध स्वीकार गरी मलाई देश सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । कुमार कट्टेलले लेखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु , तपाई त सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टिको अध्यक्ष सुनेको थिए , कम्युनिस्ट पार्टी त मजदुर र सर्वहाँरा बर्गको पार्टी हो, आज बिपत्तिमा गरीब, मजदुर हरु भोक भो(कै हिडेर घर गैरहदा तपाईं को पार्टी र सरकार गरीब र मजदुरको नै हो र ?
प्रश्न गर्न मन लाग्यो सरकार का बस , सेना प्रहरी का बस ,सरकारी प्लेन हरु सायद गरीब मजदुर हरुका लागी हैन रहेछनयो देश को एउटा जिम्बेवार नागरिक को हैसियत ले तपाई सँग एउटा कुरा माग्छु ,बिन्ती नाई नभन्दिनु होला!
जिल्ला-जिल्ला र स्थानिय तहको समन्वय को लागी मलाई पास उपलब्ध गराईदिनु होलाम मेरो व्यक्तिगत खर्च मा गाडी को व्यवस्था गरी फसेका गरीब र मजदुर को पहिचान गरी घर पुर्याई दिन्छुदेश लाई परेको बेला सेवा गर्ने मौका दिनु हुन्छ भन्ने आस मा तपाई को भलो चिताउने नागरिक म!!
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ,तपाई त सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टिको अध्यक्ष सुनेको थिए , कम्युनिस्ट…
Posted by Kumar Kattel on Wednesday, April 15, 2020
बेखर्ची महिलासँग घरबेटीको माग ‘भाडा तिर्न नसके मसँग रात बिताउ’